ny saritany manoro an'i Carthage
Carthage na Carthago ( قرطاج ) dia tanàna tonizianina any avaratra andrefan'i Tunis.
Ny tanàna Punique taloha dia potiky ny romana tamin'ny -146, namboarin'ny Romana izy tamin'ny andron'i Jules Caesar ary lasa renivohitry ny Africa proconsularis izy tamin'ny andron'ny empira Romana. Ankehitriny, ao amin'ny ambanivohitr'i Tunis ny misy an'i Carthage ankehitriny ary misy residence-na ambasadora maromaro eo. Betsaka ny terana arkeolojika any Carthage, romana ny ankabiazany, voasokajy ao patrimoine mondial de l'Unesco izy ireo hatry ny 1979.
Ny municipalité-n'ny Carthage dia mikaonty 15 922 tamin'ny 2004, ao no misy ny palais présidentiel sy ny Mosquée El Abidine. Any andrefan'i Carthage no misy ny seranam-piaramanidinan'i Tunis-Carthage.
Etimolojia[hanova | hanova ny fango]
Avy amin'ny fiteny fenisianina « Kart-Hadasht » na '« Qrthdst » ny anarany. Ny dikany amin'ny fiteny fenisianina dia « Tanana Vao ».
Voaforon'ny mpanjanatany fenisianina avy any Tyr ny tanànan'i Carthage tamin'ny -814. Araka ny mitolojia, i Didon, zandrivavin'i Pygmalion, no namorona azy. Amin'ny haisoratra « zanak'i Didon » ny anaran'ny Kartajinianina amin'ny haisoratra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Carthage&oldid=602172"
Voaova farany tamin'ny 11 Martsa 2013 amin'ny 10:57 ity pejy ity.